China ZZ Eco Products SC93 Rectangle Biodegradable Bagasse 3-Ngalaba-Ndị na-ebubata ihe oriri | ZHONGSHENG
Ngwa ahia ZZ Eco SC93 Biodegradable Bagasse 3-Ngalaba-Na-ebu Nri
Ihe adighi: SC-93
Size: 228.6 * 228.6 * 44mm
Ogo katoonu: 47 * 47 * 42cm
Anyị ZZ Eco SC-93 okirikiri eke Sugar / Bagasse Serving Container. Ekekọrila na bagasse eco-friendly, nke ihe okpete a gbanyere mkpọrọgwụ, sọks ndị a na-eweghara iji bụrụ ndị azụmahịa na-ere ma na-ere biodegrad. Mkpọ ndị a na-enye ndụ ga-ere ka nke a bụ nke dị obere igwe na - friza iji chekwaa ọnọdụ nke ngwa, nri gị na ihe ọseụ desụ gị. Ebe a na-eme ka mmanụ na-esi ike na -eme ka mmadụ sie ike, arịa ndị a na-emebi emebi na-egbochi mmanụ ịba n'ime ma na-emebi ọgbụgba ndụ gị. Ọ dị mma maka ụlọ oriri na ọ withụ servicesụ nwere ọrụ nnyefe, enwere ike iji akara mkpuchi akpa akpa ndị a dabara adaba iji gbochie mmachi nke mmiri n'oge ebufe. Ihe ndị a nwere ike ị na-eji ike ị na-eji esi nri. Thisdị akpa ndị ae nyere gị na-enyere gị aka ijikwa ya mgbe ị na-eburu nri gị. Efere ndị a eco-enyi na enyi nwere ma nwee nri nwere akpa bagasse iji mee ka nri dị ọkụ ma dị mma. Nnukwu nri nri ndị a nwere ike ijide ihe ruru 1000 ml ma tụọ n ’sentimita asatọ n’ogologo na sentimita asatọ n’obosara site na sentimita 1.73 n’ogologo. Erere na igbe 500. Enwere ihe ngosi ma resị iche iche.
Aha ahia ahia Eco SC-93
Nha ihe: 228.6 * 228.6 * 44 mm
Ibu ibu: 35g
Mbukota: 50pcs / mkpọ, 4pack / katọn.200pcs / katọn
Akụkụ nke katọn: 52.5 * 24 * 24cm
Anyị ZZ Eco SC-93 okirikiri eke Sugar / Bagasse Serving Container. Ekekọrila na bagasse eco-friendly, nke ihe okpete a gbanyere mkpọrọgwụ, sọks ndị a na-eweghara iji bụrụ ndị azụmahịa na-ere ma na-ere biodegrad. Mkpọ ndị a na-enye ndụ ga-ere ka nke a bụ nke dị obere igwe na - friza iji chekwaa ọnọdụ nke ngwa, nri gị na ihe ọseụ desụ gị. Ebe a na-eme ka mmanụ na-esi ike na -eme ka mmadụ sie ike, arịa ndị a na-emebi emebi na-egbochi mmanụ ịba n'ime ma na-emebi ọgbụgba ndụ gị. Ọ dị mma maka ụlọ oriri na ọ withụ servicesụ nwere ọrụ nnyefe, enwere ike iji akara mkpuchi akpa akpa ndị a dabara adaba iji gbochie mmachi nke mmiri n'oge ebufe. Ihe ndị a nwere ike ị na-eji esi nri buru ibu na-enweghị mgbakwunye. Dị akpa ndị ae nyere gị na-enyere gị aka ijikwa ya mgbe ị na-eburu nri ị na-eri. Efere ndị a eco-enyi na enyi nwere ma nwee nri nwere akpa bagasse iji mee ka nri dị ọkụ ma dị mma. Nnukwu nri nri ndị a nwere ike ijide ihe ruru 1000 ml ma tụọ n ’sentimita asatọ n’ogologo na sentimita asatọ n’obosara site na sentimita 1.73 n’ogologo. Erere na igbe 500. Enwere ihe ngosi ma resị iche iche.
1.100% biodegrade n'ime ọnwa atọ, Site na njirimara biodegradable na nke a na-ahụ maka ahịhịa, efere na ọkwa ndị a bụ ihe dị mma maka dochie nri nri plastic dị ugbu a. Ha dị mma maka nri, maka ahụike ma maka gburugburu
2. Ọ nweghị ihe nsi ma ọ bụ isi a na-ahapụ ka ọ bụrụ oke okpomoku ma ọ bụ ọnọdụ acid / alkali; 100% nchekwa kọntaktị nri, usoro mmepụta bụ enweghị kemịkal na ọnya mmiri, mmiri niile eji eme ihe na-ehicha onwe ya, na-ewepụta ngafe mmiri ma kpochapụ usoro nhichapu nke pulp, si otú ahụ jiri obere mmiri na ume dị ala.
3. nwere nchekwa iji microwave, oven na friji
4.100% eke eriri ezi, ezi ahụ na ịdị ọcha iji.
5. Nchịkwa mmiri na mmanụ: 212 ° F / 100 ° C mmiri ọkụ na 248 ° F / 120 ° C na-eguzogide ọgwụ
6. Ogo kachasị mma na ọnụahịa asọmpi, anyị nwere ahụmịhe bara ụba site na-elekwasị anya na imepụta na ịkwalite ngwaahịa nkwakọ ngwaahịa nri
7. Ndị ahịa anyị chepụtara ihe anabataghị, anyị nwere ngalaba ịkpụzi na ụlọ ọrụ nkuzi nke dịịrị anyị mfe ime omenala, ihe ọ bụla ịchọrọ ịme ka ọ bụrụ ihe ịchọrọ biko kpọtụrụ anyị.
8.we nwere ụlọ ọrụ 3 ugbu a, ikike anyị bụ NO.1, anyị na-ebuga karịa 300pcs 40HQ kwa ọnwa.
Nke gara aga: ZZ Eco Products SC94 Rectangle Biodegradable Bagasse 3-Ngalaba-Na-ebu Nri
Osote: ZZ Eco Ngwa 1200ml Rectangle Biodegradable Bagasse Onye Nwe